အိမ်ခေါင်မိုးသည်သင့်အိမ်၏အရေးအကြီးဆုံးကဏ္ of တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဂရုတစိုက်တည်ဆောက်ပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သက်တမ်းရှည်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိစေရန်အရည်အသွေးရှိသောပစ္စည်းများဖြင့်အမြဲတမ်းတည်ဆောက်သင့်သည်။ ခေါင်မိုးများသည်တစ်သက်တာလုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီး၎င်းတို့ကိုပြုလုပ်ထားရာများသည်အတောမသတ်အရေးကြီးသည်။ အောက်ခြေတွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ခေါင်မိုးကိုအချိန်နှင့်အမျှမည်ကဲ့သို့ထားရှိမည်ကိုသိရှိနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးခေါင်မိုးပစ္စည်းရွေးချယ်မှုများအကြောင်းလေ့လာပါ။
၎င်းသည်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောခေါင်မိုးပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်သည့်အခါရေယုံသည်အမိုးတစ်လုံးတည်းကိုအသုံးပြုရန်ပစ္စည်းများကိုရောနှောအသုံးပြုခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတွင် Asbestos ရေယုံများ၊ ကတ္တရာစက္ကူအမိုးများ၊ ဤပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အချိန်ကာလ၏စမ်းသပ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိရေယုံများဖန်တီးရန်အတူတကွရောနှောထားသည်။
ဤအမိုးမိုးပစ္စည်းအမျိုးအစားသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅ နှစ်မှ ၅၀ နှစ်အတွင်းကြာရှည်သည်။ ၁၅ နှစ်သည်သက်တမ်းအပိုင်းအခြား၏အနိမ့်ဆုံးအဆုံးတွင်အမိုးပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ဤထုတ်ကုန်သည်ဝယ်ယူရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်စျေးသိပ်မကြီးပါ။ ဒီပစ္စည်းကိုပါဝါဆေးကြောခြင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးဒီပစ္စည်းများ၏ဘဝသက်တမ်းရှည်ဖို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါစုပေါင်းအခါရေယုံအမိုးမှဖယ်ရှားပစ်သင့်ပါတယ်။
၂။ Wood Shingle ခေါင်မိုး
၎င်းသည်နောက်ထပ်ရေယုံတစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မူလတပ်ဆင်ပြီးနောက် ၂၅ နှစ်ခန့်တွင်ကြာရှည်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည့်သက်တမ်းပိုမိုမြင့်မားသည်။ သစ်သားသည်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သော်လည်းရာသီဥတုနှင့်ယိုယွင်းပျက်စီးလွယ်သည်။ သစ်သားရေယုံသည်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ပါးလွှာပြီးအပြားပြားဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤရေယုံများ၏သက်တမ်းကိုရှည်စေနိုင်ရန်အတွက်ပိုင်ရှင်များသည်ကွဲပြဲကွဲကွဲကွဲများကိုခွဲခြားပြီးချက်ချင်းမော့စ်၏ကြီးထွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အလုပ်လုပ်သင့်သည်။
သတ္တုခေါင်မိုးသည်လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းယူအက်စ်တွင်ပိုမိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လှပသောကြေးနီခေါင်မိုးသည်သူတို့၏လှပမှုအတွက်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အလွန်ဈေးကြီးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အဲဒီအစား, သွပ်သွင်းထားသောစာရွက်များပိုမိုချွေတာ, သူတို့သည်လည်းကြီးသောအသက်ရှည်ရှိသည်။ ဤအမိုးမိုးပစ္စည်းသည်တပ်ဆင်ရန်အလွန်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နှစ်ပေါင်း ၅၀ မှ ၇၅ နှစ်အတွက်ခံစားထိုက်သည်။
4. Slate ခေါင်မိုး
သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး မဟုတ်လျှင်သင်ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်သဖြင့်၎င်းသည်သင်ပုန်းပေါ်တွင်လာသောအခါရှေ့မျက်နှာ၌သတိပေးပါ။ သင်ပုန်းကျောက်ပြားကိုအစားထိုးရန်လည်းခက်ခဲပြီးလမ်းလျှောက်ရန်နာမည်ဆိုးဖြင့်ချောမွေ့သည်။ အကြောင်းပြချက်တခုခုကြောင့်သင်ခေါင်မိုးပေါ်တက်ရန်လိုသည်။ သင် slate ကပေးသောဗေဒသို့မဟုတ်အထင်ကြီးလောက်သောကြာရှည်ခံမှုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါစို့၊ သင်အစားပိုမိုလုံခြုံပြီးရယူနိုင်သောပစ္စည်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းမှု slate သို့မဟုတ်ရာဘာ slate ကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုသည်။
5. ကတ္တရာ Roll ခေါင်မိုး
သင်၏အိမ်ကိုထိပ်ဖျားဖို့ကတ္တရာလိပ်အမိုးကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသတိပေးပါ။ ဤပစ္စည်းသည် DIY စီမံကိန်းများအတွက်ကောင်းမွန်သည်၊ ဥပမာ၊ အမိုးမိုးရန်၊ သို့သော်၎င်းသည်ငါးနှစ်မှဆယ်နှစ်အတွင်းသက်တမ်းတိုပြီးအိမ်အတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုသွန်းလောင်းရန်ရွေးချယ်ပါက၎င်းကိုအစဉ်အဆက်အပျက်အစီးများကင်းစင်စေရန်သေချာစေခြင်းဖြင့်၎င်း၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ပါ။
6. ကြွေ“ စပိန်ပုံစံ” ခေါင်မိုး
ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်ဖလော်ရီဒါကဲ့သို့သောပူနွေးသောနေရာများတွင်အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များသောဤစပိန်ပုံစံအနီရောင်ခေါင်မိုးသည်အများအားဖြင့်သမိုင်းတွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏မီးခံပစ္စည်းများအတွက်သာမက၎င်း၏ပေါ့ပါးသောသဘာဝအတွက်ပါနှစ်သက်သည်။ ဤခေါင်မိုးပစ္စည်းသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အထိကြာရှည်ခံသောအထင်ကြီးလောက်သောသက်တမ်းရှိသည်။ ဤခေါင်မိုးအမျိုးအစားကိုကောင်းစွာဂရုစိုက်ရန်၊ ၎င်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့သောသုတ်ပဝါနှင့်သုတ်လိမ်းခြင်းကိုရှောင်ပါ။ သင်၏ခေါင်မိုးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း alkyd primer ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးအက်ကွဲခြင်းနှင့်ကျိုးနေသောအုတ်ကြွပ်များကိုအမြဲတမ်းအစားထိုးပါ။